सेफ र करिनाको नयाँ घरमा प्रहरी तैनाथ, किन चाहियो सुरक्षा ?
मोतीलाल दुगड प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, बजार पूँजीकरण ३१ खर्ब
राजेन्द्र खड्गीको लुकेको पाटो : यति मिठो बाजा बजाउँछन् र गाउँछन् पनि (भिडियो कथा)
तराईमा बाक्लो हुस्सु, कस्तो रहला तीन दिनको मौसम ?
पहेलोँ कपडामा फोटोशुट गरेका कारण भाइरल बनिन् सोनम !
राजनीतिक ‘चेपुवामा अदालत’, नेताहरूद्वारा ‘हुर्मत लिने काम’
हलिउड, बलिउड हुदै नेपालको कलिउड पनि बिस्तारै फड्को मार्ने क्रममा छ । कोरोनाको कारणले थला परेको थलामा परेको नेपाली चलचित्र उद्योग यतिबेला चलायमान बनेको छ । १० गतेबाट हलहरु खुल्ने चर्चा भइरहँदा फिल्म तथा म्युजिक भिडियोका सुटिङ्गहरु धमाधम भइरहेका छन् ।
नेपालमा वर्षेनी चलचीत्र र कलाकारीता क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाउन खोज्नेहरू र सपना देख्नेको ओईरो लाग्छ । कोही सफल हुन्छन त कोही संघर्ष गर्दागर्दै गुमनाम भइदिन्छन् । कोही अभिनय लगायतका कला सिकेर आएपनि सफल हुन सक्दैनन् त कोही यत्तिकै सफल हुन्छन् । मंसिर २० गते केटीएम दैनिकले बलिउड तथा साउथ हिरोहरूलाई टक्कर दिने नेपाली हिरो [फोटो फिचर] शिर्षकमा फोटो फिचर प्रकाशित गरेका थियौं ।
उक्त्त तस्विरहरुलाई ६ हजार भन्दा बढीले शेयर गरेर हजारौं मिश्रित प्रतिकृया पाएका थियौं । सामाजिक सञ्जालमा अहिले उनी निकै भाइरल छन् । उनलाई धेरैले नेपाली रणवीर सिंह तथा प्रभास भनेर नामाकरण पनि गरेका छन् । तर उनी आफ्नो तुलना अरुसँग नगरिदिए हुन्थ्यो भन्छन् ।
काठमाडौंको बौद्धमा जन्मिएका शेखर यतिबेला चर्चामा आएका हुन् । साउथ इन्डियन भेषमा फोटो सुट गराएपछि उनी चर्चामा आएका हुन् । ५ फिट ९ इन्चका शेखर बच्चै देखि कलाकारिता क्षेत्रमा आउन रुची राखेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ४ बर्ष देखि चलचित्र क्षेत्रमा छु, सबैको माया र साथ पाएर नै अगाडी बढिरहेको छु । धेरै साथीहरुले रणवीर सिंह जस्तै छस भनेर पनि भन्ने गरेका छन् । तर पनि म रणवीर, प्रभास भन्दा पनि नेपाली शेखर भएर चिनिन चाहन्छु ।”
हेरौं उनका केही तस्विरहरु :
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतवार, पुस २६, २०७७ १३:३६:५८
सुशान्तको निधनको ७ महिनापछि उनको हातले लेखेको पत्र सार्वजनिक, बलिउडकर्मी दुखी
नेपाली मूलकी टिकटक स्टारका पौने ३ करोड फलोअर्स ! हेरौं केही सुन्दर तस्विरहरु
सबैभन्दा फिट र सिक्स प्याक भएका बलिउडका यी ५ अभिनेता
सडक दुर्घटनामा परेर कतारमा एक नेपालीको निधन
आफ्नो जन्मदिनमा निश्चल बस्नेतले गरे यस्तो प्रण !
भारतीय मन्त्रीलाई यो कुन तरिकाको ढोगाइ हो मन्त्रीज्यू ?
सुनको मूल्य तोलामा ७ सयले घट्यो
प्रदेश २ मा सोमबार सार्वजनिक बिदा
फाल्गुण ४ गते लगनगाँठो कस्दै सुशील
जन्मदिनमा स्पेसल विस गरेपछि चर्चामा आयो सिद्धार्थ र कियराको प्रेम
समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको विश्लेषण
सोमवार, पुस १३, २०७७
चितवनमा पाटेबाघ मृत भेटियो
एकै परिवारका ५ जनाको मृत्यु, बिमान उड्नु अगाडी खिचेको तस्बिरले संसार रुवायो
सिंहदरबार पूर्वी गेट अगाडी, अनामनगर काठमाडौं